Liven: Haka sary sy hiaraka amin'ny mpanatrika rehetra amin'ny hetsika manaraka | Martech Zone
Liven: Haka sary sy hiaraka amin'ny mpanatrika rehetra amin'ny hetsika manaraka
Alahady, Desambra 31, 2017 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Douglas Karr
Rehefa mpandahateny ianao, ny iray amin'ireo fanamby lehibe atrehanao dia ny mamantatra hoe iza no nanatrika ny fotoam-pivorianao mba hahafahanao manara-maso aorian'izany. Ho an'ireo mpanatrika dia matetika no mahasosotra ny tsy ahafahanao manaraka ny fampisehoana eo an-toerana. Matetika ireo mpandahateny dia manolotra adiresy mailaka ahafahan'ny mpanatrika mandefa mailaka amin'izy ireo ary mangataka ny slide deck. Ny olana dia tara loatra io matetika. Miala ny mpanatrika, manadino ny adiresy mailaka ary tsy afaka mifandray ianao aorian'ny fihaonambe.
Liven dia rindranasa finday miorina amin'ny tranokala mamiratra izay manova izany rehetra izany.
Mampiditra kaody hetsika ny mpanatrika
Jereo ny fandaharam-potoanan'ny kaonferansa
Jereo ny fampisehoana ary ampidiro amin'ny mpandahateny
Vao haingana aho no nampiasa ilay sehatra tamin'ny hetsika nataoko isam-paritra. Maimaimpoana ary misokatra ho an'ny besinimaro ny hetsika, saingy zava-dehibe ny fahazoako ny mombamomba ny mpanatrika hahafahako mifandray amin'izy ireo amin'ny hetsika ho avy. Ary koa, nanana tontonana Q&A misokatra izahay tamin'io hetsika io, ary tianay ny hanome fomba mora hametrahan'ny mpanatrika fanontaniana.
miaraka Liven, nanome ny fandaharam-potoananay sy ny fampisehoana Powerpoint izahay. Liven dia nandamina ny kaody hetsika ary namoaka ny diantsika. Ny tsara indrindra dia tsy nila nihazakazaka Keynote na PowerPoint izahay; notondroinay fotsiny ilay fampirantiana efijery lehibe tamin'ny fampisehoana hetsika. Amin'ny maha mpanolotsaina antsika dia afaka mandroso ny diantsika eo an-toerana isika rehefa tafiditra ao amin'ny lampihazo… amin'ny alàlan'ny Internet daholo. Niasa tsy nisy kilema. Amin'ny maha mpandahateny ahy dia nampandrenesina tao amin'ny pejinay aza izahay rehefa nisy fanontaniana napetraka! Ny sehatra dia manolotra fanadihadiana tohiny ho an'ireo mpanatrika.
Amin'ny fitazonana azy io ho tranokala finday, tsy nisy ny fisintomana na ny fikorontanana - Nangataka ny tsirairay fotsiny aho mba hivoaka ny finday avo lenta, hanokatra tranokala ao amin'ny Liven.io, ary hiditra ny kaody hetsika. Tsy nisy olona nanana olana tamin'ny fisoratana anarana sy ny fanombohana ny hetsika. Ny tsara indrindra dia nivoaka ny hetsika izahay niaraka tamin'ny mombamomba ny olona rehetra nanatrika. Ankehitriny, rehefa mandahatra ny hetsika manaraka, dia manana ny lisitry ny mailaka handefasana fampahatsiahivana koa izahay!
Liven dia fanombohana ary ny mpanorina, Mike Young, dia tohanan'ny ekipa tsy mampino ao DeveloperTown. Mihetsika haingana izy ireo miaraka amin'ny fanovana ary fampiharana vaovao isam-bolana. Azonao atao ny mamorona ny hetsika voalohany ataonao izao ary mandray ny lampihazo ho fizahan-toetra! Raha te-hampiseho ny lampihazo ianao izao dia ampidiro kaody TST.
Mamorona ny hetsika mivantana anao
Tags: mpanatrikafisoratana anarana fisamboranafitaovana amin'ny fihaonambehetsikafisoratana anaranafisoratana anarana amin'ny hetsikafinday powerpointfampisehoana findayfampiharana tranonkala finday
Horonan-tsary: ​​Mamorona horonan-tsary an-tserasera
Infographic: Tantara fohy momba ny dokam-barotra amin'ny media sosialy